शनिवार, श्रावण १६, २०७८ ११:२४:१० युनिकोड
आइतवार, जेठ ९, २०७८ कञ्चन खवर
एउटा सुन्दर गाउँ थियो ।गाउँमा एक सम्भ्रान्त परिवार थियो ।त्यो परिवारमा गाउँलाई साह्रै माया गर्ने एक सुशील युवा थिए । उनको नाउँ प्रेमकृष्ण थियो ।गाउँमा भएका विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरू तथा एउटै माध्यमिक विद्यालयको उन्नति प्रगति तर्फ उनको रूचि थियो ।
विद्यालयमा कक्षा दसमा पढ्ने सरस्वती नाम गरेकी एक चञ्चल किशोरीको आँखा प्रेमकृष्ण माथि परे । एउटै गाउँठाउँका भएकाले सरस्वतीको चाह अनुरूपनै पारिवारिक तवरबाटै दुवैको विवाह भयो ।
गाउँमा चञ्चल सरस्वतीलाई आँखा गाड्ने ढालबहादुर नामको सुकुल गुण्डो पनि थियो ।उ पार्टी बदल्न खप्पिस थियो । जुन पार्टी सरकारमा आयो उही पार्टीको सदस्यभइ टोपल्थ्यो । सत्ताको आड विना उ एक छिन पनि टिक्न सक्दैनथ्यो । प्रेमकृष्ण भेटिनु अघि सरस्वतीका आँखा यिनै गुण्डो माथि पनि परेकै थिए ।
प्रेमकृष्ण गाउँको विकास कार्यमा अति व्यस्त हुन्थ्ये । एक छोरा , एक छोरीकी आमा भएर पनि चञ्चल सरस्वतीको पुरुष तृष्णामा कत्ति कमि आएको थिएन् ।
अचम्म ! एकदिन प्रेमकृष्ण गाउँको विकास सम्बन्धि बैठकमा भागलिन जानेक्रममा बाटोमै बेहोस भएर ढलेर संसारबाट विदा भए ।
सरस्वतीले गाउँको विकासकार्यमा आफ्ना पतिको रूचि अनुरूप आफूलाई होमिन् । गाउँलेहरूले पनि साथ दिए । ढालबहादुरले पनि राम्रै साथ दियो ।
तर अविश्वसनीय कुरा १ पतिको मृत्युको तीन महिना पनि नपुग्दै , आफ्ना स-साना छोरा छोरीहरूको माया मारेर , घर(माइतीको इज्जत फालेर , समाज र सामाजिक मर्यादालाई लात हानेर सरस्वती मध्यरातमा सुकुल गुण्डो ढालबहादुरसँग पोइल गइन् ।
सिङ्गो सुन्दर गाउँ लाजले निहुरियो !
प्रकाशित मिति: आइतवार, जेठ ९, २०७८, ०७:०२:००